Yarow ‘Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxay mudan yihiin in Maxkamad la soo taago” – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Yarow ‘Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxay mudan yihiin in Maxkamad la soo taago”
Last updated Jun 25, 2019 538 0
Madaxweynaha DF, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa caada ka dhigtay in uu yiraahdo “waxaan necebahay dadka ku sifooba musuq maasuqa, qabyaaladda iyo shisheeye raacnimada “laakiin waxaa la leeyahay marka uu sidaa oranaya asiga ayaa iska hadlaya oo asiga ayaa qodobadaas iyo kuwa ka mid ah ku caan baxay.
Aqoon yaahn Cabdulaadir Cali Yarow oo u ay wareysatay Idaacadda islaamiga ah ee Alfurqaan waxa uu sheegay in Farmaajo yahay nin aragti gaaban oo aan aqoon u lahayn waxa dowladnimo tahay sidaa aawgeedna aanuu u qalmin kursiga uu ku fadhiyo ee madaxweynanimada.
Wuxuu sheegay in uu laaluush bixiyay markii uu madaxweyanaha noqonayay oo xildhibaanada lacag badan siiyay sidoo kalena uu laaluush bixiyay markii uu shaqada ka eryayay Gudoomihii hore ee baarlamaanka Jawaari iyo markii uu keenayay Gudoomiyaha iminka ee Baarlamaanka Mursal.
Asigoo hadalkiisi sii wata waxa uu tilmaamay in farmaajo yahay madaxweynihii u horeeyay ee muwaadin Soomaaliyeed oo ciidankii dalka ka tirsanaa jiray asigoo garab duuban u gacan geliyay Itoobiya.
Wuxuu tilmaamay in asiga iyo Ra’iisalwasaarihiisa Khayre iyo saaxibadooda kale mudan yihiin in Maxkamad la soo taago.
.Halkaan ka dhegeyso wareysiga oo tayo sar ah 24 06 2019